Elizabeth Shydlovich's Amanqaku kwi Martech Zone |
Amanqaku ngu Elizabeth Shydlovich
U-Elizabeth Shydlovich uyiNtloko yeNtengiso eNgenayo eAwario, isixhobo se-SaaS. Uyingcali yokuthengisa enceda amashishini esoftware ukuba aphucule amaqhinga okuthengisa ukuze afumane abathengi, aqhube ukugcwala, avelise ulwazi, kwaye andise ukuthengisa.
Izixhobo ezisi-8 zoPhando lweNtengiso yeNtengiso eFanelekileyo kwiNiche yakho
NgoLwesithathu, Juni 22, 2022 NgoLwesithathu, Juni 29, 2022 Elizabeth Shydlovich
Ihlabathi lihlala litshintsha kwaye intengiso iyatshintsha nayo. Kubathengisi, olu phuhliso luyingqekembe emacala amabini. Kwelinye icala, kuyonwabisa ukuhlala udibana neentsingiselo zentengiso kunye nokuza neengcinga ezintsha. Ngakolunye uhlangothi, njengoko iindawo ezininzi zokuthengisa zivela, abathengisi baba matasa - kufuneka siphathe isicwangciso sokuthengisa, umxholo, i-SEO, i-newsletters, i-media media, beza kunye nemikhankaso yokudala, njalo njalo. Ngethamsanqa, sinentengiso
Iindlela ezi-5 zokuba uLuhlu lweNtlalo luyakha uLwaziso loPhawu oLufuna ngokwenene
NgoMvulo, Oktobha 18, 2021 NgoMvulo, Oktobha 18, 2021 Elizabeth Shydlovich
Amashishini ngoku kufuneka abe nolwazi ngakumbi kunangaphambili ukuba ukubeka esweni imithombo yeendaba zentlalo ngelixa uzama ukuphucula ukwamkelwa kwegama akwanelanga. Kuya kufuneka ugcine indlebe yakho emhlabeni ukuba bafuna ntoni na abathengi bakho (kwaye abafuni), kunye nokugcina ngokuhambelana neendlela zangoku zeshishini kunye nokhuphiswano. Ngena ekuphulaphuleni ekuhlaleni. Ngokungafaniyo nokubeka esweni nje, ejonga ukukhankanywa kunye namaxabiso okuzibandakanya, ukumamela zeroes kuluntu